umbuzo ukuthungwa kwempahla
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #911 by RUN974
Bonjour, ndijamelene nobunzima, i-en-possession yami i-A330 prologue de chez BBS ndifake iingubo ezithintekayo kwi-vol de quoi ce can-il venir? I-sachant que le le ngxaki sele ivelise nge-PMDG 777. Siyabonga.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #912 by Gh0stRider203
Eli Hlabathi isiNgesi kuphela. Kwinqanaba leFrench Rikooo, landela le link: www.rikoooo.com/fr/forum/
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #934 by DRCW
Kuya kuba luncedo ukwazi i-quelle version ye-FSX oyisebenzisayo. Ukuba uhlangabezana neengxaki kunye neempawu, unakho ulawulo lwe-FSX Delux kunye ne-SP1 / SP2 okanye i-accélération ne-installation. Ukuba unomsebenzi ongezantsi kwi-vapeur, unobungozi bokuba neenkcukacha nge-carte yakho yegraphic, okanye unako ukufumana umntu ongezelelweyo kwi-imeyli. Yenza le moi know, nceda